Batteriga E-bike, Bater LiFePO4, Battery Warshadaha - SOSLLI
Xalka ugu fiican ee Batiriinta Lithium iyo Bixiyaha aaminka ah ee baytariga iyo lammaanaha
Baatariga elektaroonigga ah
Qayb muhiim ah oo ka mid ah baaskiil kasta
Xulashada ugu fiican dhamaan qaababka iyo noocyada adiga
Bateriga keydka tamarta ee loo yaqaan ISO9001: 2015
soo saaraha nidaamka maaraynta tayada
10+ sanadka soo saaraha
Isdabaminta ugu Badan & Badbaadada ugu Badan
Dib u iibin tayo sare leh oo liinta ah 2600mah 3.7V 1 ...
3.6V 6250mAh Xirmooyinka batteriga LG Lithium ion ee loogu talagalay ...
18650 3.6V 2600mAh Xirmada Battery Lithium Samsung ...
3.7v 2600mah Lithium li-ion Dib loo soo celin karo ICR 18 ...
36V 13AH hoos u dhig tuubbo lithium ion Ebike bateriga loogu talagalay baarista baaskiilka
11.1V 30Ah Li-Ion 18650 Xirmooyinka Batteriga Lithium Ion Li-Ion ee Iftiinka Solar Street Light
MAXAAD U BAAHAN TAHAY SOSLLI
maxaad u doorataa batari lithium-ion
Kimistariga batteriga Lithium-ion wuxuu noqday kiimikada warshadaha ee baytariga wax lagu doorto waxkasta laga bilaabo baabuurta korantada ilaa keydinta tamarta, laga bilaabo ganacsiga ilaa adeegsiga ilaa militariga. Faa'iidooyinka kimistariga batteriga lithium-ion waxaa ka mid ah. · Cufnaanta Tamarta sare oo keenaya waqti socod dheer inta udhaxeysa khidadaha · Cabbirka is haysta iyo culayska fudud · Wakhtiyada si dhakhso badan loo soo buuxiyo · Xaraarada ballaaran iyo heerkulka kaydinta · Nolosha wareegga dheer
· 7/24 adeeg, jawaab deg-deg ah weydiimaha macaamiisha ee 12hrs ah · Xal u gaar ah oo gaar ah waxaa siiya macaamiisheenna injineerada iyo aqoonyahanada khibrada leh / cilmi baarayaasha. · Si dhakhso leh u xalli dhibaatooyinka (24hrs) haddii wax qalad ahi ka yimaad tayada tayada alaabadayada. · Hogaamiyaha soo saare batari lithium wuxuu qaatay ISO9001: 2015, UL, CE, RoHS, UN38.3, MSDS iwm. Dhammaan alaabooyinka batteriga ee 'SOSLLI' waxay daboolayaan US $ 1,000,000 caymiska mas'uuliyadda ee ay bixiso CPIC.
Faa'iidooyinka SOSLLI: (Si buuxda u Hirgalinta Nidaamka Tayada ISO9001)
1. Nidaamka Waxsoosaarka 1600 oo shaqaale ah, Qalab tayo sare leh oo laga keenay Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa abuuraya khad wax soo saar toos ah. 2. Nidaamka Soosaarka Tayada 4-Qiyaasta tayada, 110 QC shaqaale, 100% kormeer. Shirkadaha ugu sareeya 10 alaab-qeybiyeyaasha, baytariga helay CE, RoHS, UL, KC, IEC62133, MSDS, UN38.3, iwm. shuruudaha dalabka. 4. Innovation 66+ injineerro xirfadeed, xarunta R&D iyo xarunta tijaabada oo leh koox koox adag, qalabayn horumarsan iyo maalgashi aad u ballaaran.
Wadahadal xushmad leh, ka go'an gaarista macaamiisha iyo shaqaalaha. Wada shaqeynta kooxda iyo diiradda saarta bixinta badeecadaha iyo adeegyada batteriga Li-ion ee ugu wanaagsan.
Daacadnimo iyo dadaal, hal-abuur iyo hufnaan, Tayo iyo adeeg, Iskaashi iyo guul ballaaran.
Noqo teknolojiyad horseed leh, tayo sare leh, hal abuur leh oo hufan, iyo adeegga heerka koowaad ee caalamiga ah ee tamarta cusub!
Xidhmada Aaladda Batteriga, Xidhmada Aaladda Batroolka Lithium, Batroolka 20ah Lithium Ion, Battery Lithium Batteriga, Unugyada Baytariyada Lithium Ion, 3.6v Bathiil Lithium-Ion,